SEO njikọ ihe ọiceụiceụ si YouTube
Fraịde, Machị 4, 2011 Saturday, May 11, 2013 Nick carter
Anọ m na-enwe ọtụtụ ihe ịga nke ọma na-eme Youtube iji bulie mkpa ọdịda nke ibe maka otu isiokwu. Ọ bụ usoro dị mfe ma lee otu ọ si aga:
Mepụta peeji ọdịda nke nwere isiokwu gị na URL, iche iche. Nke a na enyere ndị bots aka lele mkpụrụ okwu anya n'ụzọ dị iche iche wee kweta na ọ dị mkpa na ahịrịokwu ahụ ị na-ele anya. Dịka ọmụmaatụ, m ga-eji ya http://www.addresstwo.com/small-business-crm/
Mepụta vidiyo ị ga-etinye na ibe ọdịda a. Site na SEO, ọdịnaya vidiyo ahụ enweghị isi ma ọlị n'ihi na anyị niile maara bots enweghị ike iri vidiyo. Mana, site na echiche mmadụ, gbaa mbọ hụ na vidiyo ahụ bara uru n'ezie. Ka emechara, nke a bụ na peeji nke na anyị na-aga na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ na.
Bulite vidiyo na Youtube na jiri isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu gị dị ka aha nke vidiyo. Dịka ọmụmaatụ, akpọrọ vidiyo m, "Obere azụmahịa CRM"
N'ikpeazụ, tinye njikọ njikọ gị (http: // gụnyere) na nkọwa nke vidiyo.
Mgbe Youtube bipụtara vidiyo a, eriri ọ bụla hụrụ nke dabara na usoro nke URL, na-amalite na HTTP, na-akpaghị aka na URL ahụ. Nke a bụ ebe URL ọdịda peeji nke ya dị mkpa n'ihi na ịnweghị ike ịgbanwe ederede arịlịka ahụ n'onwe gị, Youtube na-ejikọ adreesị ahụ. Yabụ, inwe okwu igodo gi na URL ana achi achi na ederede arịlịka ahụ nwere isiokwu gị dị mkpa. Iji maa atụ, lee hyperlinked URL na nke a vidiyo vidiyo.
Mana nke a abụghị njikọ na-esoghị? N'ezie ọ bụ. Ihe ntinye arịlịka nke Youtube kpuchiri na URL gị, a ga-enye ya àgwà nke rel = ”adighi-eso”. Mara ihe: onye na-eche! Agbanyeghị ihe ọkọlọtọ w3 na-ekwu na mkpado na-esoghị ụzọ ga-apụta, data akụkọ ihe mere eme egosila m oge na oge ọzọ na njikọ ndị ae chere na ha agbaghị ga-enyere aka kwalite ịdị mkpa nke URL a chọrọ. Ọ bụ ezie na ọ baghị uru karịa njikọ njikọta, ọ dị ire.
Ọzọkwa, mkpado H1 dị na ibe a, aha, nwere isi okwu gị. Yabụ, ị nwere peeji dị mkpa maka oge igodo gị na-ejikọ peeji nke ọdịda gị site na ederede arịlịka ejiri okwu gị. Ọ dị mfe!
Nke ikpeazu, ma obughi opekata, itinye vidiyo a na peeji nke ọdịda ebe o jikọtara ya ugbu a bụ ihe ikpeazụ dị mkpa. Vidio a agbakwunyere na-agwa bot nke Google na ọdịnaya nke ibe ahụ dị mkpa n'ezie maka isi okwu achọrọ. N'ihi gịnị? N'ihi na aha nke vidiyo agbakwunyere nwere isi okwu nke ibe a na-ezube. Ọ bụ ezie na ihe ndị ọzọ agbakwunyere flash anaghị agbagharị, enwere m obi ike ọ bụla na Google bot na-amata ihe Youtube na ihe kpatara aha vidiyo ahụ na algorithm ya.
M ga-eme otu nkwanye - tinye njikọ gị n'ihu ọdịnaya gị karịa na ya. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị agbasa ma gụọ ntinye nkọwa YouTube niile. Ị ga-ahụ na ị ga-amụba ọnụego ịpị-site gị site n'itinye njikọ mbụ.
Chaị! Nke ahụ dị egwu! Amaghị nke ahụ! Mana, enwere m ajụjụ: ọ bụrụ na itinye njikọ na saịtị gị mgbe ị kwuchara okwu na vidiyo, ọ ga-adị njọ maka azụmahịa gị? M pụtara, Google ọ ga-ata saịtị m ahụhụ? ọ bụrụ na ọ bụghị, ihe ọjọọ nwere ike ime?
Amalitere m ime nke a ntakịrị ihe karịrị otu ọnwa gara aga ma na-enweta ezigbo nsonaazụ maka ọ bụghị naanị onwe m kamakwa ọtụtụ ndị ahịa. daalụ maka ịhapụ nzuzo m n'akpa ahụ. LOL.
Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịdegharị ọdịnaya vidiyo gị. Nke a ga-enyekwa ya ohere ka mma ịhụ ya n'ime ọchụchọ YouTube. Otu enyi m nyere m isi http://speakertext.com nke bụ ọrụ na-arụ ọtụtụ ọrụ maka gị. Eji m n'aka na ị nwere ike itinye ederede edegharịrị na ibe ọdịda wee zoo ya n'ihu ọha mgbe ị ka na-enyere ọkwa ibe gị aka. Ezigbo ozi na ndụmọdụ maka ịkwalite ọdịnaya vidiyo n'ezie kama itinye ya naanị.
Ezigbo ozi. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtaghị ka ntinye vidiyo nwere ike isi nyere ha aka. Leba anya n'iji ọrụ dị ka Ederede Ọkà Okwu na-edegharị ha. Nke a na-enye gị ohere biputere ederede na YouTube nke na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ọdịnaya vidiyo gị na YouTube n'onwe ya. Ị nwere ike were ederede wee tinye ya na ibe ọdịda gị mana zookwa ya ka ị ghara ịhụ ya.
Mee 7, 2011 na 3: 30 PM
Daalụ maka ozi na-enye nkọwa. Naanị ajụjụ m ga-abụ, gịnị kpatara iji megharịa ọdịnaya vidiyo azụ na ibe ọdịda? Ndị mmadụ ahụlarị ya na YouTube, gịnị kpatara na ị gaghị enwe ọdịnaya dị mkpa dị iche iche dabara na isi okwu kama? Nke a ọ gaghị adị irè ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa?
Mee 7, 2011 na 4: 58 PM
Nnukwu ajụjụ. Enwere ụzọ abụọ nke ndị na-ekiri na-eru vidiyo - otu
pụtara nwere ike ịbụ site na ọchụchọ n'elu ikpo okwu nnabata vidiyo dị ka YouTube,
ma ọ bụ site na ndị mmadụ na-atụgharị vidiyo na YouTube. Otú ọ dị, na-etinye ihe
vidiyo dị na saịtị gị ga-ebuli peeji ahụ na igwe ọchụchọ wee gosipụta
n'ime mmanya vidiyo nke egosiri na nsonaazụ ọchụchọ. Dị ka
nke ọma, ọ bụrụ na ị nwere ezigbo netwọk mmekọrịta na PR - ikesa vidiyo ahụ
ọdịnaya dị na ibe ọdịda gị nwere ike ịdọta okporo ụzọ karịa. N'ikpeazụ,
egosiri ya n'ọtụtụ ule na vidiyo dị na ibe ọdịda nwere ike
mụbaa ọnụego ntụgharị. Ekwenyere m gị otu nkwanye ugwu -
hụ na vidiyo dị na ibe ọdịda gị dabara na ọdịnaya
Ebe ahụ. Nke ahụ bụ ezigbo njikarịcha!
Ọdọ Mmiri District ije
Mee 22, 2011 na 10: 52 AM
Ekwesịrị m ịsị na akụkọ gị dị n'elu bụ nke kachasị mma na nke ọkachamara nke m gụrụ taa ma agụọla m ole na ole na hyperlinks You Tube. Mkpa dị n'etiti ihe nchọta vidiyo nke otu a kwuru na ibe weebụ onye nwe ọhụrụ kwalitere dị ukwuu ma na-adịkarịghị ewere ya site na "Webụsaịtị SEO" ndị ọzọ na echere m na nke a dị ezigbo mkpa na nkwubi okwu ezi uche dị na atụmatụ ahịa m. Daalụ.
Nke a bụ ezigbo nwa osisi post.
Akụkọ mara mma maka ijikọ site na youtube, nke a maka ndụmọdụ SEO a
Nọvemba 17, 2014 na 9:32 nke ụtụtụ
Ndụmọdụ na-adọrọ mmasị na daalụ maka ịkekọrịta. Site na Google na-achịkwa ọtụtụ ọchụchọ ndị na-eme na ịntanetị, inwe ụfọdụ ọdịnaya na njikọ dị na nyiwe dị iche iche bụ ụzọ doro anya ị ga-esi rite uru na onye ọ bụla webmaster ma ọ bụ onye na-ede blọgụ. Na nnukwu okporo ụzọ YouTube na-enye iwu kwa ụbọchị n'ofe ịntanetị, ọ nweghị ebe ka mma iji nke a maka okporo ụzọ.
Jenụwarị 12, 2015, elekere 11:09 nke abalị
Ezigbo post, amasị ọdịnaya. M nọ na-eche ihe isiokwu ị na-eji, hụrụ n'anya na-apụ apụ n'akụkụ. Biko zitere m njikọ njikọ gị ma ọ bụrụ na ị nwetara otu, ọ ga-amasị gị ịnweta template na ngwa mgbakwunye
Jenụwarị 13, 2015, elekere 3:38 nke abalị
Anyị na-eji Ngwa mgbakwunye NchNhr WordPress na-anabata Superfly dị na Codecanyon. Isiokwu a bụ isiokwu izizi ahaziri nke ukwuu anyị ka na-arụ ọrụ imeziwanye.
Jun 22, 2015 na 5:43 nke ụtụtụ
N'ụzọ dị mwute, ịkwesịrị ịme vidiyo iji mee nke a nke ga-adị ọnụ karịa naanị mgbasa ozi.
Enwere m ike bulite vidiyo na iPhone m n'efu! Mba?
Storelọ Ahịa E-Liquid UK
Ị nụtụbeghị banyere Fiverr?
Nnukwu akwụkwọ ozi, n'agbanyeghị, YouTube bụ ihe enyemaka dị egwu maka njikọ na mmata.
Disemba 29, 2015 na 5:58 mgbede
Akụkọ mara mma! Achọrọ m ịlele ya.